Incazelo: Beldibi Santana Ihhotela 3 - Inkanyezi ehhotela aphakeme etholakala edolobhaneni Beldibi 1, amakhilomitha 26 kusukela endaweni ephakathi ye Antalya. He is yesibili lolwandle umugqa. Kusukela edolobheni Kemer, it is ahlukaniswe ibanga amakhilomitha 11, futhi kusukela Antalya sezindiza - 41 km.
Ihhotela ngokwaso siqukethe ezimbili isakhiwo ezintathu storey, elakhiwa ngo-2005.
amakamelo: Beldibi Santana Ihhotela 3 Isikhwama siqukethe 88 amakamelo. Zonke zingamalungu ivulekile, ahlotshiswe izwi eliphansi.
Ikamelo has a TV, kukhona iziteshi ezimbili isiRashiya, ucingo, umshini ongenisa umoya, mini-bar (lutho). Ukuze usebenze kwedeski umsebenzi. Indlu yangasese is tile (phansi futhi izindonga), eshaweni. Inkonde ngayinye ifakwe umshini kuvulandi. Ikamelo kumele zibe ngeyodwa Embhedeni owenezelwe. Izilwane ezifuywayo ivinjelwe.
Amandla kagesi: It unikeza Beldibi Santana Ihhotela inikeza 3 yokudlela main nge ithala ongaphandle, abasebenza uhlobo alufakwa. Yokudlela angazamukela abantu 90. Phakathi nesidlo, zonke iziphuzo zikhishwa mahhala ukupheka Turkish. Ngaphezu yokudlela kukhona Amabha amabili, isikhathi egijima ivela 9.30 ukuze 23,00. Omunye iseduze yokudlela main, kanti eyesibili - ngasechibini. Ungadla abahambi uphiwa usuku lonke. Ngaphezu kwalokho, lapha ungathenga noma eliphi iziphuzo zokupheka zendawo, ice cream, ayo fresh.
lolwandle: Ihhotela Beldibi Santana Ihhotela 3 inezidingo itshana lolwandle yayo, elise 250 amamitha kusukela ehhotela. Izambulela, lolwandle amathawula kanye sun bed amahhala. Izivakashi ogwini inikeza nemidlalo ehlukahlukene amanzi, kuhlanganise uhambo ngesikebhe.
Ulwazi Olwengeziwe: Ukuze kube lula izivakashi ku-indawo yokupaka. Kukhona kakhulu ongaphandle indawo yokubhukuda, sun bed mahhala. Kulabo abaye yanquma ukuhlanganisa umsebenzi nokungcebeleka, kukhona ikamelo lengqungquthela, ukufinyelela internet kuzo zonke izindawo zomphakathi. Kukhona ekamelweni elihlukile yokugcina imithwalo edilini lomshado ukuphepha idiphozi ibhokisi (icala) esitolo izivakashi eziyigugu e ngamaholide. Kukhona cinema encane. kukhona izithombe, phakathi kwezinye ezikhangayo.
Ezemidlalo abathanda Beldibi Santana Ihhotela inikeza itafula khulula ithenisi, amageyimu ebhodi. Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungadlala amabhiliyade. Phakathi services zikhokhwe - zokwelashwa, service izingubo, concierge, exchange. Kulabo obakhathalelayo ubuhle babo ngamaholide, kuyancomeka ukuba uvakashele isikhungo ukuqina, okugeza Turkish, Hammam, sauna, massage.
Ukuze holidaymakers abasha kakhulu nokugada abantwana.
Ukubuyekeza: Esinye salezo izindawo lapho ungakhululeka - ke Beldibi Santana Ihhotela 3. Ukubuyekeza luye lwabonisa ukuthi kulabo ukuphumula lapha bayajabula kakhulu ngamagumbi zabo elikhanyayo futhi ivulekile. Izikhungo ihambisana ngokugcwele ehhotela klassnosti. Amakamelo futhi endaweni igcinwe ihlanzekile futhi icocekile.
Abasebenzi hhotela nenhlonipho nonomusa. Phakathi izisebenzi kukhona izisebenzi inkulumo kancane ngesiRashiya. Endaweni yokwamukela izivakashi njalo kwenziwe inhlangano ihlele ukuthi ezikhangayo eziseduze. Ethandwa kakhulu iyona uhambo Antalya.
Kukhona esitolo isikhumbuzo lapho ungakwazi ukuthenga izipho enhle engajwayelekile nabangani kanye nomndeni wakho.
Ihhotela "Vysotsky", Ekaterinburg, indawo, izibuyekezo, izilinganiso